उत्कृष्ठ लयमा महिला फुटबल
अन्डर एटिन महिला फुटबलमा डबल ह्याट्रिक । योभन्दा रमाइलो खबर के हुनसक्छ । नेपाली फुटबल टिम पहिले सेटिङमा बदनाम भो, त्यसपछि फूटबल खेल पाताल भासियो । हालैका दिनमा फुटबलको स्तर झन झन खस्किएर गएको छ ।
तर, य िनै बेला नेपाली महिलाले पाकिस्तानी महिला टिमलाई १२ गोल गरेर महिला फुटबलको भविष्य उज्यालो देखाएका छन् । भुटानमा भएको यो फुटबल म्याच नेपाली महिला फूटबलको इतिहासमा सधैं सम्झनामा रहने छ । यो खेलामा रेखा शर्माले मात्र ७ गोल गरेकी थिइन् । आज बंगलादेशसँग नेपालको भीडन्त छ । यो खेलमा नेपालले जित्ने सम्भाबना छ किनकि नेपाली महिला फूटबल टिम लयमा छ, आफ्नो उत्कृष्ठ खेल्ने इच्छाशक्तिका साथ उत्साहित छ । नेपालमा व्यापक रुपमा फुटबलका प्रशंसकहरु छन्, तिनलाई निराश पार्ने राष्ट्रिय र युवा फुटबलरहरुले यी होनहार महिला फुटबलरहरुसँग सिकेर नेपालको नाम कहिले फुटबलको इतिहासमा लेख्न लेखाउन सक्लान् ?
राजतन्त्र फालेर गल्ती भएछ
यी हुन् कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारीले । यिनी पश्चातापको स्वर निकालेर भन्दैछन्– राजतन्त्र फालेर गल्ती भएछ ।
पोखराबाट यिनले भनेका छन्– ‘जव राष्ट्रियताका कुरा आउँथ्यो कांग्रेस राजासँग नजिक हुन्थ्यो । लोकतन्त्रमा समस्या आयो भने कम्युनिष्टलाई साथमा लिन्थ्यो, राजतन्त्र सकिएपछि अहिले कांग्रेस र कम्युनिष्टको दुई धार छ । राजतन्त्र फालेको प्रति मेरो असन्तुष्टी छ । नेपाली जनताले निर्णय गरे देशमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ ।’
शंकर भण्डारी केन्द्रीय सदस्य हुन् । पार्टीको नीति संघीयता हो, समर्थन गर्नैपर्छ तर यो कार्ययोजनाबिहीन रुपमा आएको छ । जबरजस्ती निर्णय गराइएको हो । त्यसैले समस्या छ ।
पार्टीका युवा न पाका नेता, अधिकांश व्यक्तिगत लाभमा लागेका छन् । त्यसैले पार्टी कमजोर छ, लोकतन्त्र पनि कमजोर हुँदैछ । कसले कति योगदान दियो त्यो सबैलाई थाहा छ । योगदानभन्दा लाभ लिनेहरु धेरै भए । यसले पार्टीलाई समस्यामा पारेको हो ।
यो कम्युनिष्ट सरकार, यो सरकार त आलोचनाको लायक पनि छैन । नेता शंकर भण्डारीले भनेका छन्– खै कहाँ छ शान्तिसुरक्षा ? कानुनव्यवस्था अपराधीकरण भइसकेको छ । जताततै बलात्कार, हत्या हिंसाको महामारी छ । शान्तिव्यवस्था कायम गर्ने सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना नै छैन । निर्दोषलाई पक्राउ गरेर हत्यारा साबित गराउन खोज्छ सरकार ?
यतिमात्र होइन, सीके राउतको संरक्षण गरिरहेछ सरकार । सीके राउत को हो, कहाँबाट आयो, किन देश टुक्य्राउँछु भन्छ, कसले यसलाई हिम्मत दिएको छ ? नेपाल सरकार के हेरेर बसेको छ । राज्य टुक्य्राउँछु भन्नेलाई कारवाही गर्न सक्दैन यो सरकार भने यस्तो सरकारको के कुरा गर्नु ? यो सरकार त बिखण्डनवादी पालेर बसेको सरकार हो ।